कुस्तीमा जुटेको मधेस
कुस्तीमा जुटेको मधेस उत्साह साग खेलकुदपछि पनि रहला?
ऋग्वेद शर्मा/दीपक घिमिरे शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६, १६:३३
भैरहवा- २०५६ सालतिरको कुरा हो, कुस्ती खेलाडी खेचन यादव कुस्ती खेलिरहेकै ठाउँमा सेनाको गोली लागेर ढले। त्यसपछि कहिल्यै नफर्कने गरी कुस्ती मैदानमै बिलाए।
राजवीर यादवसँग कुस्तीबारे कुरा गर्दा उनको स्मृतिमा झल्को दिन खेचनको त्यो क्षण अहिले पनि अगाडि आइदिन्छ। ‘कुस्ती खेलिरहेकै बेला खेचनको टाङमा सेनाको दुई गोली कसरी लाग्यो र खेल मैदान कसरी रगताम्य भयो’ राजवीरको आँखा अगाडिको घटना सुन्नेलाई पनि चसक्क पार्ने छ।
उचाइमा पुगिसकेको नेपाली कुस्ती किन कमजोर हुँदै गयो र तराई मधेसमा कुस्तीमा नयाँ पुस्ता किन कम भए भनेर कसैले सोधिदियो भने त राजवीरलाई खेचन ढलेको क्षणले अझ पीडा दिन्छ।
राजवीर अहिले कुस्तीका प्रशिक्षक हुन्। तर ४६ वर्षका उनी आफूलाई अझै खेलाडीकै रुपमा चिनाउन रुचाउँछन्। ‘म अझै खेल्दै छु नि! अस्ति भर्खरै भारतीय पहलमानलाई हाम्रै गाउँमा हराएँ,’ खुसी हुँदै सुनाउँछन् राजवीर।
नयाँ पुस्तामा घट्दै गएको कुस्तीको रुचि जगाउन लागिपरिरहेका राजवीरले सुनाएको ‘हाम्रै गाउँ’ सिरहा गोलबजार नजिकै हो। जहाँ उनले कुस्तीको दाउपेच सिके र त्यसैमा लागिरहे।
राजवीरले सुनाएको खेचनको घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ को समयमा कुस्तीको विकास ठप्पै जस्तो भयो। ‘प्राय: त सेनाले नै माओवादी भन्दै दुःख दिन्थे, कुस्ती खेल्न त परको कुरा सिकाउनै पनि निकै समस्या हुन्थ्यो। कुस्ती खेलाडी हुँ, माओवादी होइन, भन्दा पनि पिटपाट सहनु पर्थ्यो, कतिले त ज्यान नै गुमाए,’ राजवीरले पुराना दिन सम्झँदै सुनाए।
कुस्तीको प्रारम्भलाई हेर्ने हो भने यसमा भिडन्तभित्र पनि अनुशासन छ। तर नेपालमा कुस्ती खेलमा लागेका खेचनहरूले अनुशासित खेलमा रहेर पनि माओवादी भएको आरोपमा सेनाको धरपकड सहनु परिरह्यो। कुस्ती खेलमा वर्जित हुने हतियारको मैदान बाहिरको आक्रमणले खेचनले ज्यान नै गुमाउनु पर्‍यो।
कुस्तीको आरम्भ त्यस समयमा भएको मानिन्छ, जतिबेला मानिससँग हतियारको ज्ञान र प्रयोग नै थिएन। विशेष त पशुबलमाथि जित हात पार्न मानिसहरूले कुस्ती कला विकास गर्न थालेको अनुमान गरिन्छ। त्यसले मानिसको जीवनयापनमा सिकारलाई अझ बलियो बनायो।
रामायणमा उल्लेख भएको बाली-सुग्रिव भिडन्त होस् वा महाभारतमा भीम दुर्योधनबीचको युद्ध, कुस्तीका दाउपेच पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख्य छन्। त्यसका आधारहरू हेर्दा लडाइँमा पालना हुने दाउपेचभित्र पनि अनुशासन भने झल्कन्छ नै। विशिष्ट समयमा कुस्तीबाझहरू भेला गरी लडाउने र त्यसको आनन्द लिने प्रचलन त हाम्रै पुर्खासम्म नै आइपुग्यो।
पूर्वीय सभ्यतासँग मात्रै होइन, कुस्तीको सम्बन्ध मानवीय विकाससँग नै जोडिन्छ। इजिप्टमा नाइल नदी किनारमा रहेको बेने-हसन समाधीस्थलको पर्खालमा कुँदिएको चित्रहरूमा समेत कुस्तीमा इशापूर्वका प्रमाणहरू देखिन्छन्। पाँचौं शताब्दीदेखि १५ औं शताब्दीसम्म जापान, बेलायत र फ्रान्सका राजखानदानमा कुस्तीको प्रयोगबारे त लेखोटहरू पनि भेटिन्छन्। त्यसपछि खेलकै रुपमा विकास भएको कुस्ती त सबैको सामु छँदैछ।
कुनै हतियारबिना भिड्ने द्वन्द्वयुद्धका रुपमा हेरिने कुस्ती जब खेलका रुपमा विकास भयो तब यसले नैतिक संहिताका रुपमा खेलको अनुशासनलाई अझ बलियो बनायो। शारीरिक बलको लेखाजोखासँगै मनोवैज्ञानिक सीप पनि महत्वपूर्ण बन्यो। त्यस्तै ज्ञानले साना शरीरका खेलाडीले पनि कठिला पहलमानहरू पछार्न थाले।
शारीरिक व्यायाम, असल आहार, सदाचारको पालना कुस्ती खेलाडीका लागि सहज पक्कै छैन। खेलमा हुने नैतिक संहिताले त कुस्ती भिडन्तको भिन्न अनुशासनलाई बलियो बनाएकै छ। ‘मल्ल युद्ध’का नामले समेत बुझिने यस्तो कुस्ती कला नेपालमा विशेषतः तराई मधेशतिर नै देखिन्छ।
सुरुवात हेर्दा जीवनयापन हुँदै शत्रुता निवारणसँग जोडिए पनि कुस्ती विशुद्ध व्यायाम र खेल नै हो। तर खेलकै रुपमा रहेको कुस्ती १० वर्षे ‘जनयुद्ध’को समय नराम्ररी प्रभावित भयो। त्यो समय कमजोर बनेको मधेसको कुस्ती अहिले विस्तारै उठ्ने प्रयासमा देखिन्छ। त्यसैमा लागिरेहका छन् राजवीर यादव जस्ता खेलाडी।
अहिले भैरहवाबाट झण्डै ३ सय ५७ किलोमिटर पर जनकपुरमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत कुस्ती खेलका लागि तयारी अन्तिम चरणमा छ। कुस्तीका खेलहरू जनकपुरस्थित धनुषा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हलमा हुनेछ। जसका लागि कभर्ड हलले रंगरोगनसहित नयाँ स्वरुप पाइसक्यो।
सन् १९८९ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको चौथो सागबाट कुस्ती खेल समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि सबै सागमा कुस्ती समावेश भइरहेको छ। नेपालले अहिलेसम्म एक रजत मात्र जित्न सकेको कुस्तीमा यसपटक आश बढी छ।
नेपालमा साग आयोजनाको तेस्रो चरणमा पहिलो पटक काठमाडौंबाहिर आयोजना हुन लागेको साग खेलकुदमा कुस्तीको सबै जिम्मा जनकपुरलाई छ। मंसिर २० देखि २३ सम्म कुस्तीका खेलहरु हुनेछन्। यसले मधेसमा कमजोर हुँदै गएको कुस्तीले नयाँ जीवन पाउने आशमा खेलाडीहरु छन्।
७ महिला र ७ पुरुष गरी कुस्तीमा सहभागी हुने १४ खेलाडीहरु अहिले हेटौंडामा ‘क्लोज क्याम्प’मा छन्। राष्ट्रिय टिमबाहिरका खेलाडीहरुको जमघट भने अहिलेदेखि नै धनुषा खेलकुद विकास समितिको कवर्ड हल वरपर देखिन्छ। यसले तराई मधेशमा लोकप्रिय मानिएको कुस्ती प्रतियोगिताप्रति बढेको आकर्षण देखाउँछ। यसपटक त अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै कुस्तीमार्फत आफ्नो परिचय दिने अवसर मधेशले पाएको पनि छ।
नेपालमा भारतबाट विभिन्न कुस्ती प्रतियोगिता खेल्न यसअघि पनि खेलाडीहरु आउने गरेकै थिए। यसपटकको खेल राष्ट्रिय टिमसँग जोडिने भएकाले पनि माहोल भिन्न बनिरहेको छ।
जनकपुरमा कुस्ती आयोजनाको समन्वय गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक रहेका कमल किशोर चौधरी भौतिक पूर्वाधार सबै तयार भएर अब जनकपुर अतिथि सत्कारमा तयार रहेको बताउँछन्। ‘कुस्तीका लागि सबै तयारी भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार तयार छन्। हामीले सा‌ँस्कृतिक कार्यक्रमका लागिसमेत तयारी गरेका छौं अब अतिथि सत्कार गर्ने पर्खाइ मात्र हो,’ उनले बताए।
साग कुस्तीको आयोजना जनकपुरमा हुनाले पनि यस क्षेत्रका कुस्ती पारखीहरूलाई नयाँ स्वादमा खेल हेर्ने पर्खाइ रहेको छ। धनुषामा मात्रै होइन रुपन्देहीमा त स्थानीय तहमार्फत कुस्तीलाई वार्षिक खेल पर्वकै रुपमा अगाडि बढाउने योजना पनि बनिरहेका छन्। रुपन्देहीको रोहिणी, ओमसतिया गाँउपालिका तथा देवदह नगरपालिकाले पछिल्लो समय कुस्तीको विकासका लागि प्रतियोगिता पनि गरिरहेका छन्।
ओमसतिया गाउँपालिकाले त अखडा (खेल मैदान) नै निर्माण गरेर कुस्ती विकास थालेको छ। ‘मानिसहरूको रुचि कुस्तीमा बढाउन तथा पहलमान उत्पादन गर्न अखडा नै बनाएर जुटेका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवट राहुलले सुनाए। ओमसतिया गाँउपालिका-५ गौरी तथा वडा नम्बर-६ मझौली मा बर्सेनी कुस्ती प्रतियोगिता हुन्छन्।
रोहिणी गाँउपालिकाको पोखरभिण्डी तथा देवदह नगरपालिकाका खैरेनीमा पनि प्रतियोगिताहरू हुने गरेका छन्। भैरहवामा जारी पाँचौ लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन औद्योगिक व्यापार तथा कृषि महोत्सव–२०७६ मा पनि कुस्तीलाई प्रतियोगिताको रुपमा नै सञ्चालन गरियो। यसले पछिल्लो समय बढ्दै गएको कुस्तीको आकर्षण देखाउँछ।
कुस्ती खेल हेर्नका लागि जती मजा आउँछ त्यति नै यो खेल टिकाइराख्न समस्या रहेको खेलाडीहरू बताउँछन्। ‘मुख्य त खेलाडीलाई लागि आवश्यक खानपान मिलाउन नै समइा छ, थोरैतिनो खाएर पुग्दैन’ महोत्तरीका कुस्ती खेलाडी लक्ष्मण यादवले सुनाए।
लक्ष्मण अहिले सागमा कुस्ती हुने जनकपुरमा नै छन्। उनी त्यहाँको माहोल नियालिरहेका छन्। जनकपुरमा कुस्तीको आयोजनाले यस भेगमा नयाँ खेलाडीमा उत्साह थपिने उनको आश छ।
खानपान मिलाउन सके पनि आवश्यक प्रशिक्षक र खेल्ने ठाउँकै पनि अभाव देखिन्छ। ‘कुस्ती खेलका लागि आवश्यक प्रशिक्षक, अखडा, डाइट खानाको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा पहलवानहरु चाहे जसरी कुस्तीमा रमाउन सकेका छैनन्,’ प्रशिक्षक राजेन्द्र यादवले बताए। सरकारी स्तरबाट नै खानपान र हेरविचारको प्रबन्ध नहुँदासम्म खेलाडीलाई टिकाइराख्न नसकिने उनी बताउँछन्।
सरकारले कुस्ती खेललाई अन्य खेललाई जस्तो प्राथमिकता दिन नसकेकाले कुस्तीको विकासमा समस्या आउने गरेको रुपन्देही कुस्ती संघका अध्यक्ष रामप्रसाद कुर्मीको भनाइ छ।
‘एक सामान्य पहलवानका लागि पनि दैनिक ४ वटा अण्डा, एक लिटर दुध, चना र घ्यु आवश्यक पर्दछ। खानाको अभावले नै कतिपय खेलाडी खेलप्रति रुचि हुँदाहुँदै पनि खेल्न नपाएको गुनासो गर्छन्,’ उनले सुनाए।
जनकपुरमा आएको सागको कुस्ती आयोजनाले भैरहवासम्म बढीरहेको कुस्ती मोहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसमा लागेकालाई अखडामा मात्रै सीमित नराखी सरसल्लाह र नीतिनिर्माणमा समेत जोड्न सके अझ प्रभावकारी हुनेछ। जसले जनकपुरमा साग सकिएपछि पनि कुस्तीको माहोल बढाइराख्नेछ।